ओलीको आक्रोश : आफूले सरकार बनाउन नपाउँदा प्रतिगमन हुन्छ हो ? ओलीको आक्रोश : आफूले सरकार बनाउन नपाउँदा प्रतिगमन हुन्छ हो ?
ओलीको आक्रोश : आफूले सरकार बनाउन नपाउँदा प्रतिगमन हुन्छ हो ?
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेलगत्तै केपी शर्मा ओलीले विपक्षी दलहरूमाथि आक्रमण थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।ओलीले देशमा तथाकथित क्रान्तिकारीहरुले जनतामाझ भ्रम छरेको पनि आरोप लगाए। आफुले सरकार बनाउन नसक्ने र अरुले सरकार बनाउँदा प्रतिगमन भन्दै जनतामा भ्रम छरेको बताए ।
‘संविधान र कानुनअनुसार सरकार बनाउँदा प्रतिगमनरु के को प्रतिगमन आफूले सरकार बनाउन नपाउँदा प्रतिगमन हुने हो रुु, उनले भनेका छन्, प्रतिगमन भइरहेको छ भन्दै सबैलाई एक जुट आह्वान गरिरहेका छन्।’प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता निम्त्याउने तत्वहरु सक्रिय भएको पनि बताएका छन् । उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने तत्व सक्रिय भएको भन्दै यो सह्य नहुने चेतावनीसमेत दिए ।ओलीले सम्बोधनका क्रममा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्ति लगाउने बताएका छन्। अक्सिजन ढुवानी र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने बताउँदै ओलीले आवश्यकता र बिरामीको चापका आधारमा अक्सिजन पाउने व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिए।
कुनै पनि महामारी सोचे जस्तो अनुमान गरे जस्तो नहुने पनि उनले बताए। माहामारी हो, अस्पतालको करिडोर, पेटी र आँगनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले कहिले बाहिर पाल पनि टाँग्नुपर्ने हुन् सक्छु, उनले भने, घरमै राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सडकमै पाल टाँगेर उपचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर हामी तीव्रताका साथ नियन्त्रणको कोसिसमा छौँ।
कोभिडको प्रकोप बढिरहेका बेला उनले यसविरुद्ध सबै मिलेर लड्नुपर्ने बताए। कोभिडको प्रकोप बढिरहेका बेला सबै मिलेर लड्नु जरुरी छ। हामी जति तयारी गर्दैछौँ, कोभिड त्यो भन्दा छिटो फैलिँदैछ। कोरोना नियन्त्रण अभियानमा सहभागी सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ।